Kooxda Elman oo Saakay soo bandhigtay saxiixyadeeda cusub… + SAWIRRO – Gool FM
(Muqdisho) 22 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Elman ayaa saakay xerada tababarka waxa ay ku soo bandhigtay saxiixyadeeda dhawaan galka ee ay kooxdu la soo wareegtay.
Naadiga jaalayaasha ee Elman ayaa diyaar-garow xooggan ugu jirta tartammada kala duwan sida General Daa’uudka iyo Horyaalka Somali Premier League, iyadoo dhow ciyaartoy ay kala soo saxiixatay kooxaha dalka iyadoo ay jiraan xiddigo kale oo ay ka keensatay bariga iyo bartamaha Afrika.
Xiddigaha ay la soo saxiixatay kooxda Elman ayaa kala ah Maxamed Cusmaan Meynis oo ay ka keensatay kooxda madbacadda qaranka, Xamse oo ugu yimid Jeenyo, Ibraahim Kenyaawi oo ay ka soo qaadatay kooxda Jazeera Sports Club, Faaruq oo ay ka keentay dalka Uganda, Cusmaan oo ugu soo dhaqaaqay kooxda Midnimo iyo xiddigii hore kooxda Horseed iyo xulka qaranka Uganda Ajiga Issa ayaa ka mid ah xiddigaha ay la soo saxiixatay Kooxda Elman.
Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay macallinka labaad ee Kooxda Elman, Cumarey kaasoo kooxda ku soo dhaweeyay xiddigaha cusub, waxaana uu sidoo kale sheegay inay ciyaartoydan cusub wax u qaban doonaan kooxda.
Sidoo kale xiddigaha ajaanibta ayaa dareenkooda ka hadlay ku soo biiritaankooda kooxdan, waxaana ay xuseen inay ka farxin doonaan kooxda Elman iyo Taageerayaasheeda.
W/D: C/fitaax C/rashiid Abuukar ‘Nani’